Wax ka ogaanshaha weligiis, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waxay i xasuusisay muuqaalo laga soo qaaday filim jilicsan oo sayniska ah markii aan maqlay wax ku saabsan daahfurka meeraha dhulka u eg oo la yiraahdo Proxima Centauri. Waxay ku jirtaa meeraha xiddigta casaanka ah ee Proxima Centauri. Si kastaba ha noqotee, uma badna in aan ka heli doonno nolosha ka baxsan nolosha dhulka (Fogaanshaha 40 tiriliyan kilomitir!). Si kastaba ha noqotee, dadku marwalba waxay isweydiinayaan bal inuu jiro nolol aadamiga oo kale ah oo ka baxsan bannaankayaga. Xerta xerta Ciise tani su'aal kama taagna - waxay ahaayeen markhaatiyaal kor u qaadis ciise, sidaa darteedna waxay ogaadeen hubaasha in bini-aadamka Ciise uu hadda ku nool yahay jidhkiisa cusub adduunyada kale ee uu Qorniinku ugu yeedhay "jannada" - adduun taasi gabi ahaanba waxba kama jiraan ee waxa jira "duniyooyinka jannada" ee aan ugu yeedhno adduunka oo dhan.
Waa muhiim in la ogaado in Ciise Masiix uu gebi ahaanba ilaah yahay (Wiilka weligiis ah ee Ilaah) waa, laakiin sidoo kale waa gebi ahaanba aadanaha (Ninka haatan la sharfiyey Ciise) waa jirayaa weligiis. Sidii CS Lewis u qoray: “Mucjisada udub-dhexaadka ah ee Masiixiyiintu u taagan yihiin waa jidh ahaanshaha (Jir ahaan) »- mucjiso weligeed sii jiri doonta. Ciise wuxuu ku sugan yahay ilaahnimadiisa, laakiin jiritaankiisa aadamnimada ee sii socota wuxuu jidh ahaan ugu nooshahay jannada dhexdeeda, halkaas oo uu u adeego sidii wadaadka sare oo u sugo jirkiisa iyo sidaas darteed dib ugu soo noqoshada meeraha. Ciise waa Ilaah-Aadanaha iyo Sayidkii abuur kasta. Bawlos wuxuu ku qoray Rooma 11,36: "isaga xaggiisa iyo xaggiisa iyo wax waluba isagay u jiraan." Yooxanaa wuxuu kasoo xigtay Ciise Muujintii 1,8 inuu yahay "A iyo O" kan jiraa, kii halkaas joogay iyo kan imanaya. Ishacyaah wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in Ciise yahay "sarreeye oo sarreeya" oo weligiis nool ". (nolosha) " (Ishacyaah 57,15). Ciise Masiix, Eebaha sarreeya, Quduuska ah iyo weligiis, waa kan fuliya qorshaha aabbihiis, kaas oo ka kooban dib-u-heshiisiinta dunida.
Aynu ku xusno qoraalka Yooxanaa 3,17:
"Ilaah wiilkiisii ​​uguma soo dirin dunida inuu xukumo dunida, laakiin wuxuu u soo diray inay dunidu ku badbaaddo isaga." Qof kasta oo sheegta inuu Ciise u yimid inuu adduunka xukumo dareenka cambaareynta ama ciqaabtu waa khalad. Kuwa u kala qaybiya aadanaha laba kooxood - mid Eebbe ugu talo galay inuu badbaadiyo iyo mid kale oo lagu xukumay inuu xukumo - ayaa waliba ah khalad. Haddii Johannes (laga yaabee inuu soo xigto Ciise) wuxuu leeyahay Sayidkeennu wuxuu u yimid inuu badbaadiyo "dunida", ka dibna waxay loola jeedaa aadanaha oo idil oo kuma koobna koox gaar ah. Aynu eegno aayadaha soo socda:
"Oo waan aragnay oo waannu u marag furaynaa in Aabbuhu Wiilku u soo diray inuu noqdo Badbaadiyaha dunida" (1 Yooxanaa 4,14).
"Bal eeg, waxaan kuu sheegayaa farxad weyn oo ku dhici doonta dadka oo dhan" (Luukos 2,10).
"Sidoo kale ma aha doonista Aabbihiinna jannada ku jira in kuwa yaryarkan midkood lumo. (Matayos 18,14).
«Maxaa yeelay Ilaah wuxuu ku jiray Masiixa, wuuna la heshiiyey dunida naftiisa» (2 Korintos 5,19).
Oo bal eeg, waa wanka Ilaah oo dembiga dunida u qaada! (Yooxanaa 1,29).
Kaliya waxaan xoojin karaa in Ciise yahay Rabbiga Badbaadiyaha dunida oo dhan iyo xitaa abuurkiisa oo dhan. Tan waxaa ku caddeeyay Bawlos waraaqda ku socota Roomaanka, cutubka 8, iyo Yooxanaa kitaabka Muujintii oo dhan. Waxa Aabbaha ku abuuray Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah looma kala qaybin karo shaqsi ahaan. Augustine waxa uu xusay: "Shucadihii bannaanka u ahaa ee Ilaah ee la xidhiidha abuurkiisa] lama arki karo." Saddexmidnimada Ilaaha ah ee ah Kan qudhiisa u dhaqma sidii mid. Isaga doonistiisa waa dardaaran oo aan loo kala qaybin.
Nasiib darrose, dadka qaarkiis ayaa baraya in dhiiga Ciise daadiyay kaliya uu furayo kuwa Ilaah doortay inuu badbaadiyo. Inta soo hartay, waxay ku andacoonayaan, inay u qaddarinayaan xukunka Ilaah. Nuxurka fahamkan ayaa ah in ujeedada Eebbe loo qaybiyay xagga abuurkiisa. Sikastaba, ma jiro aayad Baybalka oo baraysa aragtidan; sheegasho kasta oo noocan oo kale ah waa turjumid khaldan oo iska indhatira furaha guud ahaan, kaas oo ah aqoonta dabeecadda, dabeecadda iyo ujeedka saddex-geesoodka ah ee Ilaah, ee isagu inagu muujiyey Ciise.
Hadday run tahay inuu Ciise damacsanaa inuu badbaadiyo oo xukumo, markaa waxay ahayd inaan soo gabagabeyno in Ciise uusan si sax ah ugu matalin Aabbaha, sidaa darteed ma garan karno Ilaah siduu isagu runti yahay. Waa inaan sidoo kale go'aan ku gaadhnaa inuu jiro kalasooc jinni ah oo ku dhex jira Saddexanka, iyo in Ciise uu muujiyay "hal dhinac" Ilaah. Natiijadu waxay noqon laheyd inaanan garanaynin caynka "Ilaah" ee aan ku kalsoonaan karno - ma waxaan aaminsanahay dhinaca aan ku aragno Ciise ama dhinaca qarsoon ee Aabbaha iyo / ama Ruuxa Quduuska ah? Fikradahan foosha xumaa waxay ka hor imaanayaan injiilka Yooxanaa, halkaas oo Ciise si cad ugu sheegayo inuu si buuxda oo sax ah u shaaciyey Aabaha aan la arki karin. Eebbe muujiyey iyo Ciise waa kan u yimid inuu badbaadiyo aadanaha, ma aha inuu xukumo. In iyo Ciise (Doodayaga weligiis ah iyo wadaadka sare), Ilaah wuxuu ina siiyaa awood ay ku noqdaan carruurtiisa weligeed ah. Dabeecaddiisu waxay beddeshaa dabeecadda taasina waxay ina siinaysaa dhammaystirka Masiixa ee annaga qudheennu aan weligeen gaadhi karin. Guushaani waxay ku lug leedahay daa'in weligeed ah, xiriir qumman iyo wadaagis la leh ku-simaha, Abuuraha Quduuska ah oo Eebbe abuuray, oo aan uun abuuri karin kaligiis - xitaa Aadan iyo Xaawo ma aysan qaban karin ka hor dhicitaanka. Nimcada ayaa leh wehelnimo leh Ilaaha saddexankiisa ka sarreeya oo meel sare iyo wakhti taagan, oo jiray, oo weligiis jiri doona. Bulshadan dhexdeeda jirkeena iyo nafteenaba Ilaah ayaa cusboonaysiiya; Waxaan helnaa aqoonsi cusub iyo ujeedo weligiis ah. Midnimadeenna iyo wadajirka aan la sameyno Ilaah, ma lihin, uma naabno, ama isku beddelin wax aannaan ahayn. Hase yeeshe, ka-qaybgalka bini-aadamka oo la sara kiciyey oo lagu soo koriyey Ruuxa Quduuska ah ee Masiixa, waxaa laynoogu soo buuxiyay dhammaystirka iyo kaamilnimada ugu sarreeya ee aadamigeennu la leeyahay.
Waxaan ku nool nahay waqtiga xaadirka ah - gudahood xadka bannaan ee bannaan iyo waqtiga. Laakiin midnimadeenna Masiixa leh iyada oo loo marayo Ruuxa Quduuska ah, waxaan dhex galnaa caqabadda waqtiga-bannaan, maxaa yeelay Bawlos wuxuu ku qoray Efesos 2,6 in aan mar horeba ku lug leenahay sarakicidda Ilaah-nin ee Ciise Masiix ee jannada ku jira. Inta lagu guda jiro jiritaanka duulaanka halkan Dunida waxaan ku xirneyn waqti iyo meel. Qaab aanan si buuxda u fahmi karin, waxaan sidoo kale nahay muwaadiniinta jannada weligeed ah. In kasta oo aan hadda ku nool nahay, iyada oo Ruuxa Quduuska ah aan mar hore la wadaagno nolosha, dhimashada, sarakicidda iyo kor u qaadista Ciise. Waxaan horeyba ugu xirnaa weligiis.
Sababta oo ah tanina waa mid run ah, waxaan ku qanacsanahay inaan ku dhawaaqayo sharciga jira ee Ilaaheenna weligiis ah. Mowqifkan waxaan ka sugeynaa buuxinta imaatinka boqortooyada Eebbe, oo aan weligeen ku noolaan doonno midnimo iyo wada nolosheenna Eebahanno. Aynu ku faraxno qorshaha Ilaah weligiis.